Gmail Theme ပြောင်းချင်လို့?? - MYSTERY ZILLION
Gmail Theme ပြောင်းချင်လို့??
Gmail Themes တွေက orginal ပါတယ်လေ....:O
မကြိုက်လို ့အသစ်တွေလို ချင်ရင် ဒီမှာသွားဒေါင်းပေတော့
MZ မှာလဲ ဒီလို Post တွေ များနေတယ်နော်။ ကြည့်ရဆိုးလိုက်တာ ကူပါကယ်ပါ ဖြစ်ရအောင် MZ က 199 မှ မဟုတ်တာ။ ကြည့်လုပ်ကြဦးလေ ကို့ လူတို့ ရ။ title ဆိုတာ အထဲက စာနဲ့ ကိုက်ညီအောင်ပေးရမဲ့ဟာကိုကွာ။
alinker wrote: »
gmail Themes မရှိလို့ပါ gmail နောက်ခံကာလာချိန်းချင်လို့ အဲဒါ Themes မရှိတော့ဘယ်လိုချိန်းရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတယ်
alinker ထည့်ထားတဲ့ insert link က အကျိုးသက်ရောက်မှု့ မရှိပါဘူး။google account ဘဲရောက်သွားတယ်။
ကိုစည်သူရေ ကျေးဇူးဘဲ နောက်လည်း လမ်းညွှန်ပေးပါအုံး။:D
Ko Ko Win အောက်က link တွေမှာ ဆွေးနွေးထားတာရှိပါတယ်။